Umaki: ukufakazelwa kwedijithali
Izindlela ezi-5 Zokuqinisa Inqubo ngaphandle Kokwenza Ubuqambi Obubeka engozini
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 11, i-2020 NgoMsombuluko, Februwari 10, 2020 UHeidi Melin
Abakhangisi nabasunguli bangathola ukusikeka okuncane lapho kukhulunywa ngenqubo. Lokhu akufanele kusimangaze. Ngemuva kwakho konke, sibaqasha ngokwazi kwabo ukuba ngabokuqala, ukucabanga, nokungajwayelekile. Sifuna bacabange ngokukhululeka, basisuse endleleni eshayiwe, futhi bakhe umkhiqizo omusha ogqame emakethe eminyene. Asikwazi-ke ukujika silindele ukudala kwethu ukuthi kube ngabalandeli bemithetho ehleleke kakhulu, yenqubo